ရယ်ရယုံ (၄၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ရယ်ရယုံ (၄၄)
Posted by etone on Oct 1, 2010 in Aha! Jokes, Satire | Comments Off on ရယ်ရယုံ (၄၄)
စိတ္တဇ ဆေးရုံတစ်ခု ဟာလူနာတွေကိုလေယာဉ်နဲ့ တင်ဆောင်လာပြီးတော့ အခြားဆေးရုံတစ်ခုကို ပြောင်းပါတယ်။ ဆရာဝန်ကတော့ လေယာဉ်မှုးဘေးမှာထိုင်နေပါတယ်။ အဲဒီမှာ လေယာဉ်ထဲ ကနေ အသံတွေကိုဆူညံနေအောင်ကြားရပါတယ်။ ဆရာဝန်က အရုးခေါင်းဆောင်ကို ဘဲလ် နှိပ်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ “ဘာလုပ်နေကြတာလဲ..ဆူညံနေတာပဲ” “ဘောလုံးကန်နေကြတာပါ ဆရာ” … “ဟာ…..လေယာဉ်ပေါ်မှာဘောလုံးမကန်ရဘူး ဆိုတာမသိဘူးလား..သွားစမ်း” “ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
အရုးခေါင်းဆောင်ထွက်သွားလေသည်။ ခဏနေ တော့ဘာသံမှ မကြားရတော့။ ဆရာဝန်သည်သဘောကျသွားသည်။ ဘဲလ် နှိပ်ပြီးအရုးခေါင်ဆောင်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ “မင်းဘယ်လိုထိန်းလိုက်တာလဲ…တိတ်ဆိတ်သွားတာပဲ” “ဆရာဘဲ လေယာဉ်ပေါ်မှာဘောလုံးမကန်ရဘူးဆို…..အဲဒါနဲ့ ကျွှန်တော်လည်း လေယာဉ် တခါးပေါက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာ အခုသူတို့ အကုန်အောက်ဆင်းပြီးဘောလုံးကန်နေကြပြီ “
စိတ္တဇ ဆေးရုံတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။လူနာတစ်ယောက်သည် သစ်ပင် ပေါ်တွင်ရောက်နေသည်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကအောက်မှနေ ပြီး ဆင်းလာဖို့ ပြောနေသည်။ လက်ထဲတွင်လည်း သင်္ကြန်ရေပြွတ်သေနတ်တစ်ခု ကိုကိုင်ထားသည်။ “ဟေ့ကောင်…….မင်းဆင်းမှာလား..မဆင်းဘူးလား..ငါ ပစ်လိုက်မှာနော်..” “မဆင်းဘူး….ဆရာ ပစ်ချင်လဲပစ်လိုက်…
ဆရာဝန်လဲ ကြံရာမရ ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီ အချိန်မှာ နောက်လူနာတစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။ ဆရာဝန်က အဲဒီလူနာဆီ ကနေအကူအညီတောင်းပါတယ်။လူနာကသေနတ်ကိုယူလိုက်ပြီး “ဟေ့ကောင်..မင်းဆင်းလာခဲ့စမ်း..ငါ ပစ်လိုက်မှာနော်..” “ဟုတ်..ဟုတ်.ဆင်းလာပါပြီ.မပစ်ပါနဲ့ ဆင်းပါပြီ..”ပထမလူနာလဲ သစ်ပင်ပေါ်ကနေဆင်းလာပါတယ်။ ဆရာဝန်က “မင်းကငါပြောတုံးကတော့ မဆင်းဘူးဘာလိုသ…ူပြောမှဆင်းတာလဲ” “ဟာဆရာကလူကောင်းဆရာရဲ့ တကယ်မပစ်ဘူးဆိုတာကျွှန်တော်သိတယ်အဲကောင်ကရုးနေတာတကယ်ပစ်မှာ..”
။ အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်က ဘယ်လောက်ကာပြီလဲအလုပ်သမား။ ။ အနှစ် ၃၀
လောက်ကြာပါတယ်အလုပ်ရှင်။ ။ အနှစ် ၃၀ ဟုတ်လား၊ နေပါဦး ခင်ဗျားအသက်က
အခုဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအလုပ်သမား။ ။ ၂၅ – နှစ်ပါအလုပ်ရှင်။ ။
…ဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လုပ်သက် ၃၀ ရှိမှာလဲအလုပ်သမား။ ။
နာရီကြည့်တာမကြိုက်ဘူးမဟုတ်လားအေးလေ ခု အဲဒါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တာပေါ့၊
ခုဆိုကျွန်တော်အကျင့်ပါနေပြီ၊ အိမ်ရောက်တော့ နာရီမကြည့်တတ်တော့ဘူး၊
ချစ်လိုက်ပုံကရွာက အမေ့ဆီပြန်သွားတဲ့ဇနီးဖြစ်သူထံ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်စာထည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကိုတွေ့%E